सेक्सका लागि डिसेम्बर नै किन ? | Indrenionline.com
सेक्सका लागि डिसेम्बर नै किन ?
काठमाडौं। डिसेम्बर एकदमै रोमाञ्चक महिना मानिन्छ । त्यसको रमाइलो पक्ष छ । अंग्रेजी महिना डिसेम्बरमा नेपाली पात्रो अनुसार आधा मंसिर र आधा पुष महिना पर्दछ । यसर्थ, यो महिनामा जाडो निरन्तर बढिरहेको हुन्छ, पश्चिमा देशहरुमा यो महिनामा धेरै चाडपर्वहरु पर्दछन् । र मानिसहरु स्वभाविकरुपमा उत्साहित र रोमान्टीक मुडमा हुन्छन् । मानिसहरुलाई लागिरहेको हुन्छ कि हावामै प्रेम तैरिरहेको छ । यसलगायत अन्य विभिन्न कारणहरु छन् । जसले गर्दा डिसेम्बर सेक्सका लागि खास महिना हो ।
नेपालको लागि मंसिर अन्तिम र आधा पुष उत्सवको महिना होइन । तर, वैश्विक परिदृश्यमा हेर्दा यो समयमा अत्यधिक पर्वहरु पर्दछन् । क्रिसमसपछि नयाँ वर्ष । पर्याप्त बिदा र रमाउने वर्ष । यसर्थ, जोडीमा घुम्ने र रमाउनको लागि खास वातावरण पैदा हुन्छ, जसले सम्भोगको लागि सजिलो बनाउँछ ।
मौसम नै त्यस्तै
जाडो बढ्छ । चिसोले तातोको खोजी गर्छ । यसर्थ, जोडीको स्पर्श र संसर्ग यो महिनामा विशेष हुन्छ ।
नयाँ वर्षको सुरुवात, पुरानोको बिदाई
डिसेम्बर वर्षको अन्तिम महिना हो अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार । यो भनेको पुरानो वर्षलाई बिदाई गर्दै नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने समय । यसर्थ, एउटा वर्षकै बिदाइ गरिँदैछ भने त्यस्तो सम्झनलागक समय किन नबिताउने रु
बिदामा सम्भोगको मज्जा
डिसेम्बरको अन्तिमतिर प्रायः मानिसहरु भ्रमणमा निस्कछन् । अब कल्पना गर्नुहोस्, अफिसको कामबाट मुक्त बिदाको समय, चिसो मौसम र कुनै सुन्दर स्थानमा तपाईको साथीसँगै छ । त्यो पल तपाईंले कसरी बिताउनुहोला रु न कहीँ जाने तनाव, न कामको तनाव । सुन्दर ठाउँमा सुन्दर जोडी । अनि के होला त्यहाँ ?
केक र चक्लेट अनि मुड बनिहाल्छ नि !
बिदा र चाडबाडको बेला मिठो मसिनो खाने प्रचलन जहाँ पनि हुन्छ । जब तपाईं तागतिला वस्तुहरु खानुहुन्छ । तपाईको शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ । शरीरमा शक्ति भरिन्छ । भरपूर केक र चक्लेट खाएपछि यसले यसले सम्भोगको लागि माहोल बनाउँछ ।
५ फाल्गुन २०७४, शनिबार २०:१७
Previous: महोत्तरीमा युवकको हत्या
Next: प्रचण्डले सम्झिए जनयुद्धका ती कहालीलाग्दा दिनहरु …
कोलकातामा बरामद ३३ किलो सुन काठमाडौँमा गायब
१ पुष २०७५, आईतवार ०८:४२
अख्तियारकै हिरासत हाउसफुल
१ पुष २०७५, आईतवार ०८:३१
६०० किलो गाँजा, हतियार र नगदसहित तीन जना पक्राउ
२९ मंसिर २०७५, शनिबार १७:३५
समाचार संग्रह Select Month December 2018 (99) November 2018 (177) October 2018 (177) September 2018 (233) August 2018 (241) July 2018 (243) June 2018 (245) May 2018 (223) April 2018 (239) March 2018 (429) February 2018 (431) January 2018 (421) December 2017 (377) November 2017 (375) October 2017 (242) September 2017 (226) August 2017 (402) July 2017 (411) June 2017 (421) May 2017 (385) April 2017 (249) March 2017 (434) February 2017 (457) January 2017 (688) December 2016 (769) November 2016 (863) October 2016 (729) September 2016 (1056) August 2016 (1104) July 2016 (989) June 2016 (456) May 2016 (354) April 2016 (234) March 2016 (53)